တောင်ပေါ်က တယောသံ – (သုံး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တောင်ပေါ်က တယောသံ – (သုံး)
တောင်ပေါ်က တယောသံ – (သုံး)
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Nov 13, 2012 in Creative Writing | 19 comments
ဟုတ်ကဲ့ ခည ..
ခုလို ပထမဆုံး လာဖတ်သွားတဲ့ …
ခိုင်ဇာ ဆိုဒဲ့ မမ ကို ကျေးဇူး တင်ပါလယ် ခည ….
နောက်များလည်း လာရောက် အားပေးဘာအုံးလို့ ….
ဆက်ရေးနေပါတယ် ခင်ဗျ …
ခုလို လာရောက် အားပေးသွားတဲ့ ဦးမာဃ ကိုလည်း
ကျနော်က ကျေးဇူးတင်ကြောင်းရယ်ပါ ……။
ကျုပ်ပို့စ်တွေမှာ မလွတ်တမ်း ကွန်မန့်ပေးသွားတတ်တဲ့
ရောင်းရင်းကြီးကို ကျေးဇူးအထူးပါလို့ ပြောပါရစေဗျာ ….
ကိုရွာစားက မြင်တာပဲဗျနော် .. အဟီးးးး
ကဲ …. ဗျာ ..
ကာလသားအုပ်နဲ့ သူတောင်းစားအုပ် တွေ့ကြပြီ ဆိုပါတော့ …
ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်နိုင်ကြဦးမတုံး ….
ကိုပေါက်ကြီး ရဲ့ မောင်ရင်လောင်း တွေ ဒီမှာလာပြီး တယောထိုး နေကြတာကိုး။
ဟုတ်တယ်နော်……. တဖြေးဖြေး တိုတိုလာတာ….
စာပိုဒ်ကို ပြောပါတယ်….. :hee:
ဖတ်ရတာ အားမရလို့ တော်ရေ့………
အာကိုက ၀တ်ထုဖတ်ရင် ရှေ့ တစ်မျက်နှာနဲ့နောက်ဆုံး စာရွက်ပဲ ဖတ်သကွဲ့ 
ညေးရဲ့ ပထမစာရွက် ဖတ်ခဲ့ပြီ…ဘယ်ချိန် ဇာတ်သိမ်းမလဲ မျှော့နေတယ်နော..
ဟုတ်တယ်ဗျ နဲနဲ တော့ တိုသွားပီ .. (စာပိုဒ်ပြောပါဒယ်)
တစ်မျိုးတော့ကောင်းပါတယ်..စာဖတ်ပြင်းတဲ့ကျုပ်တို့ အတွက်တော့ အံကိုက်ပဲ ..
ဒါပေမယ့် ဖတ်ရတာ ဆတ်တငံ့ငံ့နဲ့ ဖြစ်သေးဘူး …
ရေးရင်လဲ မြန်မြန်ရေး… တယောသံ အီးညှောင့်အီးညှောင့်နဲ့ အိပ်ပျော်တော့မယ်ဗျ …
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ …
ယခုကဲ့သို့ ကျနော့်ရဲ့ ပို့စ်လေးမှာ
လာရောက်၍ အားပေးသွားကြပါကုန်သော …
မခိုင်ဇာ၊ ဦးမာဃ၊ ရောင်းရင်းကြီး၊ ကိုရွာစား၊ အရီးလတ်၊ မရွှေအိ၊ မွန်ကစ်၊ ငဗိုက်၊ မွန်မွန်၊ ဥကြောင်၊ ကြည်ဆောင်း၊ ဂျူးဂျူးမ
တို့အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ……။
ပို့စ် တိုသွားတယ် ဆိုတာကလည်း .. အဟဲ ..
ရေးပြီးသလောက် တင်လိုက်ခြင်းမို့ ဖြစ်ပါကြောင်း …
နောက်ခါ မတိုမရှည် တင်ပေးပါ့မည် ဆိုသည့်အကြောင်း ………..။
ရှည်ရှည်လေး ရေးပေးပါ မောင်အံစာ။
အပျင်းပြေသွားအောင် တယောသံ ကျယ်ကျယ်လေး ထိုးပေးလိုက်ပါ။ :harr:
တယောဆရာကို ဆရာလုပ်သွားလိုက်တယ်။ Kwi:
အားလုံးပြီးလို့ ဇာတ်သိမ်းပြီဆိုမှ အားလုံးတစ်ခါထဲ ဖတ်တော့မယ် ….
နဲနဲချင်းဖတ်ရတာ အားမရဘူး …